Waa maxay Glycine Propionyl-L-Carnitine (GPLC) Glycine Propionyl-L-Carnitine waxaa loola jeedaa nooca molecularly bonded ee propionyl-L-carnitine iyo amino acid glycine. Waxaa loo kala qaadaa qoyska si isku mid ah Carnitine [...]
Waa maxay Oleoylethanolamide (OEA)? Oleoylethanolamide (OEA) waa jaangooyaha dabiiciga ee miisaanka, kolestaroolka, iyo rabitaanka cuntada. Dheef-shiid kiimikaadka waxaa lagu soosaaray tiro yar mindhicirada yar. Molikuyuullada dabiiciga ah ayaa mas'uul ka ah [...]
Malaayiin dad ah oo halkaas jooga ayaa lacag aad u badan ku bixiya alaabada gabowga sida Nicotinamide Riboside chloride. In kasta oo gabowgu yahay geeddi-socod dabiici ah, haddana dadku ma doonayaan inay u muuqdaan duq. [...]
Waa maxay quercetin? Quercetin (117-39-5) waxay ka tirsan tahay koox isku-dhafan oo loo yaqaan flavonoids. Magaca kiimikada waa 3, 3 ′, 4 ′, 5,7-pentahydroxyflavone. Waa midab si dabiici ah ugu jira khudaar badan, miraha, [...]